‘दि भ्वाइस अफ नेपाल ३’को कोचमा तृष्णाको प्रवेश - Entertainment Khabar
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल ३’को कोचमा तृष्णाको प्रवेश
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २९, २०७७ समय: १९:३२:१६
नेपालकै नम्बर १ गायन रियालिटी शो ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’को सिजन ३ मा एक जना कोच परिवर्तन गरिएको छ । सिजन २ मा कोचको रुपमा रहेकी गायिका आस्था राउतले यो बर्ष समय दिन नभ्याएपछि उनको स्थानमा गायिका तृष्णा गुरुङलाई कोचको रुपमा अनुवन्धित गरिएको हो । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो कुराको जानकारी दिइएको हो ।
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’को तेश्रो संकरणमा कोचको रुपमा जोडिन पाउँदा आफू निकै नै उत्साहित भएको र आफ्नो तर्फबाट बेष्ट दिन आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने तृष्णाले बताइन् । ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’का निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले आस्थाले समय दिन नसक्ने भएपछि उनले सहमतीमै शो छाडेको बताए । यसमा अन्य कुनै कारण नभएको पौडेलको भनाई छ ।
अहिले ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल ३’को डिजिटल अडिसन चलिरहेको छ । एक महिनापछि हिमालय टेलिभिजन एचडीबाट यो शो प्रशारण हुने बताइएको छ ।
शोमा कोचको रुपमा गायकत्रय दिप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल र राजु लामा भने यथावत् नै छन् । ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’को रोमाञ्चक यात्रामा यसपटक झनै उत्कृष्ट रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने दिप, प्रमोद र राजुले बताए ।
यसअघि टिम दिप र टिम प्रमोदका प्रतिस्पर्धीले यो शोको टाइटल जितिसकेका छन् । यसपटक के राजु लामा आफ्नो टिमले शोको टाइटल जित्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् त ? राजु भन्छन्–‘जित्नु नै सबै कुरा होइन । म सधै नै आफ्नो टिममा आउने प्रतिस्पर्धीले उत्कृष्ट काम गरेको हेर्न चाहन्छु । यसैले मलाई जित्नैपर्छ भन्ने दबाब छैन ।’
यसैविच, आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा हिमालय टेलिभिजन र विज्ञापनदाताहरुविच हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’लाई ओप्पोले प्रस्तुत गर्नेछ । हिमालय टेलिभिजनका प्रमुख धर्मराज भुषाल र कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेलले ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’का स्पोन्सरसँग संझौता साझेदारी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै हिमालय टीभीका प्रमुख धर्मराज भुषालले टेलिभिजनले दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन दिन विश्वकै नम्बर १ रियालिटी शोका फ्रेन्चाइज ल्याइरहेको बताए । उनले, यो सिजनको ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’लाई गतबर्षको भन्दा झनै उत्कृष्ट बनाएर प्रस्तुत गर्ने बताए ।
तस्वीरः शंकर गिरी
‘ईजाकाय हाउस’ संचालनमा
काठमाडौँ : लाजिम्पाटको र्याडिसन होटल संगै पारिवारिक बाताबरणमा खुलेको “ईजाकाय हाउस” खानाको पारखीहरुको लागि स्वादिष्ट’ हाइ...
समृद्ध तेह्रथुमको रुपमा म्याङ्गलुङ्ग नगरपालीकालाई अगाडि बढाउछौ नगर प्रमुख तुम्बाहाम्फे
तेह्रथुम । कोरोना कहर पछि स्थानिय तहमा तिव्र रुपमा विकाशले गति लिएको छ । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन बनेको समाजमा निर...
गायक दिनेश बिसी र शान्तिश्री परियारको आवाजमा नायिका रन्जिता गुरुङ्ग अभिनयमा ‘नेपाल आमा’सार्बजनिक(भिडियो)
काठमाडौँ : गायक दिनेश बिसी र शान्तिश्री परियारको आवाजमा मनै रुवाउने गीत ‘नेपाल आमा’ सार्बजनिकको भएको छ भने नेपाल बाहिर आ...
मिसेस तामाङ -२०२० को विनर पार्टी सम्पन्न
काठमाडौँ – एस.के. इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले आयोजना गरेको मिसेस तामाङ -२०२० को बिजेता तथा उपबिजेताहरु संग विनर तथा सक्...
‘ओई प्यारी’ भन्दै आए निशान र एलिना (भिडियो सहित)
नेपाली गीत संगीतलाई माया गर्ने गीतकार अनिश घिमिरेको शब्द रचनामा नयाँ गीत ‘ओई प्यारी’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। ...
सत्य कथामा आधारित”पत्थरको मुटु” गीतको भिडियो हेरी प्रेमीका सम्झिदै एकासी भाबुक भए विजय पुन
काठमाडौँ । सत्य कथामा आधारित विजय पुनको ‘पत्थरको मुटु’ गीतको भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गायक प्रताप दासको समुधु...